Zeziphi iinkampani ezinkulu zase-Australia? | Ukuhamba kwe-Absolut
ULuis Martinez | | Ostreliya
Zeziphi iinkampani ezinkulu zase-Australia? Lo mbuzo unqabile ngaphandle kwesangqa sezoqoqosho esikhethekileyo. Oku kuchatshazelwa yinto yokuba ilizwe lolwandle libonakala likude kakhulu kuthi kwaye sazi okuncinci ngalo.
Nangona kunjalo, kuya kufuneka uyazi ukuba i-Australia inayo irente ngomntu ngamnye ephezulu kuneJamani, i-United Kingdom ne-France. Ukongeza, ikwindawo yesibini, emva ENorway, kwi Isalathiso sophuhliso lomntu kwaye indawo yesithandathu kuloo mgangatho wobomi elungiswe yimagazini 'Ingcali yezoqoqosho'. Kuko konke oku, ukwazi ukuba zeziphi iinkampani ezinkulu zase-Australia kubalulekile kwihlabathi lanamhlanje lehlabathi.
1 Zeziphi iinkampani ezinkulu zase-Australia? Ukusuka kwezimbiwa ukuya ekubhankini ukuya kwezempilo
1.1 BHP Ibhiliyoni
1.2 I-Commonwealth Bank yase-Australia
1.3 Iqela leRio Tinto
1.4 Iqela lakwa Woolworths
1.5 IArhente yeBhanki yase Westpac
1.6 IMacquarie Gruop
1.7 I-Westfarmers, umthengisi phakathi kweenkampani ezinkulu zase-Australia
1.8 Inkampani Telstra Corporation Limited
1.9 Iqela leTransurban
1.10 I-Amcor Limited, ukupakisha ukwenza enye yeenkampani ezinkulu zase-Australia
Zeziphi iinkampani ezinkulu zase-Australia? Ukusuka kwezimbiwa ukuya ekubhankini ukuya kwezempilo
Ezona nkampani zinkulu zase-Australia zinamacandelo oqoqosho ahlukeneyo, kodwa onke abelana ngamandla amakhulu kumacandelo asebenzayo. Siza kukubonisa ezinye zeenkampani.
Ku malunga Enye yeenkampani ezinkulu zemigodi ehlabathini. Yazalwa ngo-2001 ukusuka ekudityanisweni kwe-Bhritane Billion kunye ne-australia Umnini weNduli eyaphukileyo. Ikomkhulu lawo likwi Melbourne, kodwa inabathunywa kumazwe angamashumi amabini anesihlanu, apho ikhupha khona izimbiwa ezinje nge-iron, idayimani, i-nickel kunye ne-bauxite.
Kunyaka ophelileyo ibhengeze ingeniso ebikufutshane I-46 yezigidigidi zeedola, kunye nenzuzo eqikelelweyo encinci engaphantsi kwesiqingatha, malunga ne-20 yezigidigidi zeedola.
Isebe le-Commonwealth Bank yase-Australia
I-Commonwealth Bank yase-Australia
Njengoko ubona kwigama layo, yibhanki esebenza, ingekho kwilizwe laselwandle kuphela, kodwa nakubo bonke abanye abakwindawo, kunye nase Asia nkqu nakwi EUnited States y Great Britain.
Kukhuphiswano olunzima nenye ibhanki enkulu elizweni, i Isizwe sase-Australia, I-Commonwealth inkulu kunelo ngo-capitalisation. Kunyaka ophelileyo ibhengeze ingeniso ebikufutshane Iibhiliyoni ezingama-30 zeedola zase-AustraliaOko kukuthi, malunga ne-45 yezigidi zeerandi.
Iqela leRio Tinto
Sibuyela kwimisebenzi yezemigodi ukukuxelela ngale nkampani ikwayenye yeenkampani ezinkulu zaseOstreliya. Ikomkhulu layo liseLondon, kodwa lazalwa ngokudityaniswa kweBritane IQumrhu laseRio Tinto-Zinc, ngemigodi eSpain, naseOstreliya IConzinc Rio Tinto.
Es inkampani enkulu yemigodi yamalahle kwaye kwiminyaka embalwa edlulileyo izamile ukuthengwa yi-BHP Billion, ebesikuxelele yona nje. Nangona kunjalo, umsebenzi awugqitywanga. Kwi-2020, iqela laseRío Tinto laxela ingeniso phantse I-US $ 45 yezigidigidi.
Iqela lakwa Woolworths
Ihlala kwenye yeendawo zokuqala kuluhlu lweenkampani biotechnology. Phakathi kwemimandla yayo yemveliso yileyo yezitofu zokugonya, ezingumxholo namhlanje, kodwa kunye neemveliso ezivela kwiplasma kunye nokunye ukuvuselelwa kweseli. Yenziwe ngo-1916 ngurhulumente wase-Australia uqobo, kodwa yabucala ngo-1994.
Iqeshe abantu abangama-25 kwaye kunyaka ophelileyo ibinengeniso ye- phantse i-10 yezigidigidi zeedola phantse amawaka amabini ezibonelelo. Ngokubhekisele kwiimali zayo zentengiso, inexabiso le-145 yezigidigidi zeedola.
IOfisi yeBhanki yaseWestpac
IArhente yeBhanki yase Westpac
Kwakhona ibhanki iyavela kolu luhlu luphendula kwezona nkampani zinkulu zaseOstreliya. Eyilwe ngo-1817, I-Pacific pacific (okuthetha ukuba iWestpac) inikezelwe kwiibhanki zesintu kunye nezorhwebo, ezolawulo kunye nobhanki beziko.
Inamasebe ngaphakathi ENew Zealand. Ngokumalunga nexabiso eliyinkunzi kwimarike, iphantse ibe yi-90 yezigidigidi zeedola zase-Australia. Ingeniso yakho epheleleyo ngo-2020 yayi phantse i-22 yezigidigidi kwaye inzuzo yayijikeleze iibhiliyoni ezine zeedola zase-Australia. Ngokubhekisele kubasebenzi bayo, inamawaka angama-40.
Umsebenzi wale nkampani ukwangokunxulumene nokugcina imali, nangona kunjalo kwimeko yayo utyalo mali. Inobukho kumazwe angama-25 kwaye inabasebenzi abangaphezu kwe-14 lamawaka. Yi oyena mphathi wempahla kwiziseko zophuhliso, njengoko ilawula malunga ne-495 yezigidigidi zeedola kolu hlobo lweeasethi.
Iimali zayo zentengiso ziphantse zayi-53 yezigidigidi kwaye, ngo-2020, yabhengeza malunga nezigidi ezintathu zeerandi zenzuzo. Inamandla kakhulu le nkampani kangangokuba amajelo eendaba ase-Australia ayibiza ngokuba yi "Millionaire Factory."
I-Westfarmers, umthengisi phakathi kweenkampani ezinkulu zase-Australia
Ukuba iinkampani zangaphambili bezizinikele kwimigodi, ukubhankisha kunye nemicimbi yezempilo, lo wenza njalo thengisa. Ngokukodwa, ithengisa iikhemikhali kunye neemveliso zeshishini, izichumisi kwaye, kuba ifumene iqela leColes, kunye nokutya.
I-Coles Group ivenkile enkulu, exhaswa yi-Westfarmers
Eyasungulwa ngo-1914 njengentsebenziswano yamafama, ngoku iqeshe abantu abangaphezu kwekhulu lamawaka. Ngo-2020 wayenengeniso epheleleyo phantse i-31 yezigidigidi zeedola, Ngenzuzo eqikelelweyo yokujikeleza ezimbini.
Inkampani Telstra Corporation Limited
Enye yeenkampani ezinkulu zaseAustralia ayinakubakho kolu luhlu lweenkampani ezinikezelweyo othungelwano. Ngokukodwa, ithengisa umnxeba osisigxina kunye noweselfowuni, i-Intanethi kwaye ihlawule iinkonzo zikamabonwakude. Yeyona ibaluleke kakhulu kwezo zisebenza kwilizwe laselwandle, kunye nemali yentengiso ephantse ibe yi-45 yezigidigidi zeedola.
Ngo-2019 yayinabasebenzi abamalunga nama-26 kunye nengeniso yayo yonyaka zijikeleze i-30 yezigidigidi zeedola ngenzuzo epheleleyo phantse kane.
I-Australia lilizwe elikhulu, elingaphezulu kwezigidi ezisixhenxe zeekhilomitha. Ke ngoko, ayizukumangalisa into yokuba inkampani ezinikele kuyo ulwakhiwo nokusebenza koohola bendlela Iphakathi kwezona zikhulu kwilizwe.
Ukongeza, iTransky isebenza kwi Canada y EUnited States. Imali yayo yentengiso imalunga ne-43 yezigidigidi zeedola kwaye yadalwa ngo-1996. Okwangoku inabasebenzi abamalunga ne-1500 kunye nengeniso zijikeleze i-3 yezigidigidi zeedola ngenzuzo epheleleyo engamawaka.
Ivenkile yeeFowuni zeTelstra
I-Amcor Limited, ukupakisha ukwenza enye yeenkampani ezinkulu zase-Australia
Le nkampani inikezelwe kwezothutho, nangona kwimeko yayo icandelo lokupakisha. Ikho kumazwe amane, kubandakanya España, kwaye inexabiso lentengiso phantse kwi-27 yezigidigidi zeedola. Inabasebenzi abamalunga nama-35 kunye nengeniso epheleleyo phantse i-10 yezigidigidi zeedolaNgelixa inzuzo iyonke ijikeleze i-1500 yezigidi.
Ukuqukumbela, ukuba ubuzibuza Zeziphi iinkampani ezinkulu zase-AustraliaSele uzibonile ukuba zezabo, ngokusisiseko, kumacandelo afana nezemigodi, ukubhankisha kunye nokuthuthwa. Nangona kunjalo, ezinye iinkampani ezinkulu, ezinje nge I-CLS encinciBenza imveliso yezococeko okanye, njenge Iqela leGoodman, kwilizwe leshishini lokuthengisa izindlu nomhlaba.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhamba kwe-Absolut » Zeziphi iinkampani ezinkulu zase-Australia?